एक डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी काम गर्नु अघि ... - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
7 सक्छ, 20215सक्छ, 2021 बाइट डिजिटल B2B, ब्लग, व्यापार, विशेष समाचार, ग्लोबल थोक अनलाइन, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
के तिनीहरूसँग मार्केटिंग उद्देश्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ जुन तपाईं वृद्धि गर्न चाहानुहुन्छ?
कुनै कम्पनीसँग काम गर्नु अघि गर्दै, विशेष रूपमा डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीहरू होइन, तपाईंले केही अनुसन्धान गर्नु पर्छ उनीहरू को हुन् उनीहरूको नैतिकता र नैतिकतामा। अनुसन्धान
तपाईंले एजेन्सीलाई सम्पर्क गर्नु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंलाई थाहा छ र तपाईंको केपीआईहरू के हो भन्ने बारे निश्चित विश्वास छ र के तपाईंले प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको रोडम्याप।
के म तपाईंको एजेन्सीको साथ दीर्घकालीन कार्य सम्बन्धको आशा गर्न सक्छु?
जब तपाईं डिजिटल बजार एजेन्सीहरूको लागि वरिपरि हेर्न सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईंले पक्का गर्न आवश्यक छ कि तिनीहरू परिणामहरू लिन सक्षम छन् र ग्राहकहरूको ईतिहास छ। प्रत्येक डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीको वेबसाइटमा, तिनीहरूसँग पोर्टफोलियो हुनुपर्दछ उनीहरूले गरेको कामको विस्तृत विश्लेषणहरू र उनीहरूको ग्राहकले उनीहरूसँग प्रयोग गरेका सेवाहरू। यदि तपाईं उदाहरण खोज्दै हुनुहुन्छ भने बाइट डिजिटलको ग्राहक पृष्ठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
एक नजर राख्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि तिनीहरूसँग तपाईंको व्यवसाय उद्योगसँग सम्बन्धित कुनै केस स्टडीहरू छन्। कहिलेकाँही एक एजेन्सीमा बढ्तै विश्वास प्राप्त गर्न उस्तै उद्योगको कार्य देख्दा यसलाई आश्वासन दिन सकिन्छ। ध्यानपूर्वक तथ्या analy्कहरूको विश्लेषण गर्न सम्झनुहोस्, तिनीहरू हालसालै भएको हो वा केही समय पछि? के तिनीहरूसँग मार्केटिंग उद्देश्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ जुन तपाईं वृद्धि गर्न चाहानुहुन्छ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर पोर्टफोलियो पृष्ठमा दिइनु पर्दछ।
कुनै पनि कम्पनीसँग काम गर्नु अघि, विशेष रूपमा डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीहरू होइन, तपाईंले केही अनुसन्धान गर्नु पर्छ उनीहरू को हुन् उनीहरूको नैतिकता र नीतिहरूमा। यदि कम्पनीको नराम्रो प्रतिष्ठा छ वा के तपाईं सहमत हुनुहुन्न तिनीहरूको वेबसाइट सामग्री पढ्दा तपाईले फेला पार्नुभयो भने, त्यसोभए तपाईंले सायद उनीहरूबाट टाढा बस्नुपर्दछ। यो सँधै राम्रो हुन्छ कुनै एजेन्सी फेला पार्नुहोस् जुन तपाईंलाई पहिले राख्न र तपाईंको इच्छाको परिणामहरू ड्राइभ गर्न प्रेरित हुन्छ। तिनीहरूको ग्राहक समीक्षा हेर्नुहोस् र प्रत्येकको ध्यानपूर्वक अध्ययन गर्नुहोस्, केहि डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीहरूको उनीहरूको साइटहरूमा ग्राहक प्रशंसापत्र हुन्छन् जहाँ तपाईले उनीहरूसँग काम गर्ने बारेमा व्यक्तिहरूले के भनेका कुरा देख्न सक्नुहुन्छ।
एक डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी तपाईलाई कस्तो प्रकारको चीजहरूको विकास गर्न र बढ्नको लागि हेर्नु पर्छ भनेर सल्लाह दिन सक्छ, तर दिनको अन्त्यमा यो सबै तपाईंमा तल आउँदछ। तपाईंले एजेन्सीलाई सम्पर्क गर्नु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंलाई थाहा छ र तपाईंको केपीआईहरू के हो भन्ने बारे निश्चित विश्वास छ र के तपाईंले प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको रोडम्याप। कुनै अर्थ वा लक्ष्य बिनाको मार्केटिंग योजना योजना होइन।
बिलि Meth विधि
धेरै एजेन्सीहरू प्रोजेक्ट, घण्टा वा सेवा मा निर्भर गर्दछ तपाईं तिनीहरूबाट चाहानुहुन्छ। डिजिटल मार्केटिंगको लागि कहिले पनि सम्झौता हस्ताक्षर गर्न हतार नगर्नुहोस् जबसम्म तपाईंसँग केहि फरक उद्धरणहरू हुन्छन् जुन तपाईंलाई मूल्य तुलना गर्न अनुमति दिन्छ। कहिलेकाँही यो सँधै को हो भन्ने बारेमा सधैं हुँदैन तर सब भन्दा राम्रो देखिनेसँग मूल्य कुशल को छ। माथिको तुलना गर्दा माथिका सबै कारकहरू स्थानमा आउनुपर्दछ, मूल्य मात्र होइन।
प्रत्येक डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीको वेबसाइटमा, तिनीहरूसँग पोर्टफोलियो हुनुपर्दछ उनीहरूले गरेको कामको विस्तृत विश्लेषणहरू र उनीहरूको ग्राहकले उनीहरूसँग प्रयोग गरेका सेवाहरू।
के प्रश्न गर्ने
हामीलाई थाहा छ कि तपाईले जहिले पनि तपाईले चाहानु भएको सबै कुरा तपाईको प्रारम्भिक परामर्शमा सोध्न सक्नुहुन्न, त्यसैले हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको सूची बनाउने निर्णय गरेका छौं जुन तपाईले डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सीलाई सम्बोधन गर्दा तपाईको डिजिटल रणनीतिमा लिनको लागि भाँडा लिने बारेमा कुरा गर्नुपर्दा। ल यसरी हामी गर्छौं…
तपाइँलाई के लाग्छ हाम्रो मार्केटिंगको मुख्य फोकस क्षेत्र हो जुन कामको आवश्यक छ?
तपाईं मलाई यो हासिल गर्न कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ र समय सीमाभित्र?
के तपाइँ कुनै परिणामहरूको प्रतिज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ? यदि हो भने, के?
तपाइँ कसरी मूल्य गर्नुहुन्छ?
के तपाईंसँग मेरो व्यवसायको डिजिटल मार्केटिंगका लागि अन्य सुझावहरू छन्?
हामीले आशा गर्‍यौं कि माथिका सबै सूचकहरूले तपाईंलाई मद्दत गरेको छ वा भविष्यमा तपाईंलाई सहयोग गर्ने छ यदि तपाईं कहिले डिजिटल एजेन्सीसँग काम गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ। यी एजेन्सीहरूमा एसईओ, पीपीसी, सीआरओ, एनालिटिक्स, सामग्री र सोशल मिडियामा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरू छन् त्यसैले उनीहरू कडा ग्राहकहरू लिनका लागि अनुभवी र सक्षम छन्। यो सबै सही फिट पाउने र राम्रो जोड्ने सम्बन्धको बारे मा हो कि जो कोही तपाइँको मार्केटिंग गर्दछ। केहि प्रोत्साहन प्रदान गर्दछ मुक्त एसईओ साइट लेखा परीक्षा आफ्नो वर्तमान स्थिति र तपाइँको वेबसाइट को स्वास्थ्य मूल्यांकन गर्न को लागी, जुन तपाइँको वर्तमान डिजिटल मार्केटिंग योजना र लक्ष्यहरु लाई संशोधन गर्न वास्तवमै उपयोगी हुन सक्छ। शुभकामना तपाईंको डिजिटल एजेंसी खोज! यदि तपाईं आउटसोर्स गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् तपाईंले फेला पार्नुभयो सहि एजेन्सी!
सांप्रदायिक समाचार डिजिटल डिजिटलमार्केटिंग मार्केटिङ
नमस्ते हामी बाइट डिजिटल हो, दक्षिण यार्कशायरबाट डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी! यदि तपाईं हामी मा भौंकनु हुन्छ भने, हामी वचन दिन्छौं हामी काट्छौं!